Turkiga: Laba bilood kaddib waxaa na soo gaaraya gantaallada S-400 - BBC News Somali
Gantaalka lidka diyaaradaha ee S-400
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay inuu dalkiisa gantaallada lidka diyaaradha ee S-400 uu Ruushka sameeyo uu dalkiisu dhawaan hananayo.
Wuxuuna Mr Mevlut hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Ankara.
Turkigana wuu dareemayaa ayuu yiri xulafadiisa gaashaanbuurta NATO sida ay u daneeynayaan hubkaasi inaan Ruushka ka iibsanno.
Xigashada Sawirka, TRT
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu
"Waxaanna marwalba tixgelineynaa talooyinka nooga imanaya xulafada NATO inkasta oo waxwalba laga horumarinayo rabitaanka dalka Turkiga".
"NATO waxaa loo baahan yahay iney fahmaan baahida uu Turkiga u qabo inuu adkeeyo hawada dalkiisa gantaallada S-400 ay qayb ka yihiin qorshaha Turkiga u yaalla inuu hawadiisa cadaw kaga ilaashado." ayuu yiri.
Turkiga oo Ruushka ka soo iibsanaya gantaallada difaaca
Heshiiska Turkiga uu la galay Ruushka oo uu gantaallada lidka diyaaradaha S-400 kaga iibsanayo ayaan farxad gelinin Washington, iyada oo weliba ka digtay haddii uu Turkiga uu tallaabadaasi uu qaado ay ka saareyso kaalinta ay ku lahayd soo saaridda diyaaradda F-35 isla-markaana ay xulafada NATO kala kulmi doonto cunaqabateeyno kale.
Gantaalka S-400 oo gaari saaran
Laba bilood kaddib waxaa dalka Turkiga soo gaaraya Gantaalladi ugu horreeyey ee S-400 oo uu Turkiga Ruushka ka soo iibsaday.
Wafdi wasiirro ka kooban oo Turkiga ka socda ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay Washington si ay u dajiyaan xiisadda Mareykanka kala dhaxeysa ee ku saabsan hubka Turkiga uu Ruushka ka iibsanayo.
Kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka Patrick Shanahan, wuxuu warbaahinta u sheegay wadahadallo ay Turkiga la yeesheen kaddib iney isku soo dhawaadeen ayna u dhaw yihiin iney heshiis kama dambeys ah ka gaaraan khilaafka labada dhinac u dhaxeeya ee la xidhiidha iibsashada hgantaallada lidka diaaradaha ee S-400.
Muxuu soo kordhin karaa heshiiska hubka ee Turkiga iyo Ruushka?
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa isagana horay u sheegay inuu dalkiisu uu bixiyay carbuunta heshiiskan oo lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo doolar.
Turkiga ayaa leh ciidammada labaad ee ugu badan ee Gaashaanbuurta NATO, dalalka xulafada ku jirana waxaa lagu booriyay in ay iibsadaan hub kuwaas u dhigma.
Turkiga ayaa calaaqaad dhaw la yeeshay Ruushka wixii ka dambeeyay markii uu xumaaday calaaqaadkii ay la lahaayeen Maraykanka.
Turkiga ayaa ka soo horjeeda taageerada Maraykanka ee jabhadda YPG ee Kurdiyiinta Suuriya.
Turkiga iyo xulafadiisa oo duullaan ku ah magaaladda Idlib
Turkiga oo xoojinayo xiriirka ganacsi uu la leeyahay Africa
Turkiga iyo US oo "duulaan ku ah" Raqa
Habka uu gantaalkaasi u shaqeeyo